Amagumbi ayi-3 anomtsalane, athuleyo. Iflethi okanye indlu ekwicomplex enegadi nenqugwala - I-Airbnb
Amagumbi ayi-3 anomtsalane, athuleyo. Iflethi okanye indlu ekwicomplex enegadi nenqugwala
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguThomas
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enamagumbi okulala ayi-3 aneesofa ezinkulu nezinto zobugcisa, phakathi kweBremen neBremerhaven. Umatshini wokuhlamba izitya nowempahla uqukiwe.
Igadi ikumema ukuba uhlale okanye ube nendawo yokoja. Kanye ngaphandle komnyango yindawo esembindini welali entle kunye nehlathi elineendlela zokunyuka intaba. Unokuthatha uhambo olubanzi, olungacetywanga uze wonwabele indalo kunye nezilwanyana zakho.
Eyona ndawo ikufutshane yiHagen im Bremische, ekwiikhilomitha eziyi-5 ukusuka kwivenkile yesaphulelo ukuya koogqirha.
Iflethi enkulu ibekwe kumgangatho wokuqala wendlu ezimeleyo. Banoxolo nokuzola ibe bayazingenela endlini. Ukufikelela kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex yesibini kuphambene ngqo. Ininzi indawo yemoto, ibhayisekile okanye isithuthuthu. Xa kuza kuhlalwa ixesha elide kukho nomatshini wokuhlamba impahla kwiflethi okanye kwindlu ekwicomplex.
Ukusuka apha ungenza uhambo oluhle okanye uhambe ngebhayisekile. Ukuba ufuna ukwenza okungakumbi kumgama weekhilomitha eziyi-3 yiBirkenring Hoope. Apha kulapho kuqhutywa khona izithuthi nemicimbi ye-autocross. Inkcazelo engakumbi ingafumaneka eBirkenring HOOPE kwi-intanethi.
Iivenkile zokutyela ezintsha neekhefi ezikule ndawo zikumema ukuba uhlale. Siphakathi kweBremen neBremerhaven kuLwandle Olusemntla. IUniversum Bremen, imidlalo yeqonga, indlu yemozulu kunye nokunye okuninzi gqiba ukuhlala apha.
Sihlala kwindlu enye kwaye sinokufikelelwa nanini na.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wulsbüttel